> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Moto X
Just hesho kartoo Motorola Moto X telefoonka? Waxaa laga yaabaa, aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xiriirada ka phone jir Nokia waa inay, si aad farxad la wadaag saaxiibadaada karaa hal mar. Si kastaba ha ahaatee, su'aalaha waa sida aad ka laba madal oo kala duwan keeni karaan xiriirada? Haddii xiriirada ma badan, waxaad iyaga edit karaa mid mid ku Moto X dhaldhalaalaan telefoonka. Laakiin, waxa haddii aad leedahay boqolaal xiriiro? Sida iska cad, waa sida shaqo aad u weyn.
Isdeji. Kala beddelashada xiriirada ka Nokia in Moto X noqon karaa mid aad u fudud, marka aad Wondershare MobileTrans . Sida qalab telefoonka xiriir kala iibsiga xirfad, waxay ku siinaysaa fursad ah in ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada ku saabsan telefoonka Nokia in Moto X la mid click aad. ma tirada oo keliya kala iibsiga telefoonka, laakiin nuqulka ka sameeysatid maclumaadka dhamaystiran sida cinwaanka email, magaca companys iyo horyaalka shaqo.
Tallaabooyinka fudud si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Moto X
Download version maxkamad free of MobileTrans in aad nuqulka xiriir ka Nokia in Moto X.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans si fiican u la shaqeysaa Nokia telefoonada socda Symbian 40, Symbina 60 iyo Symbian ^ 3, Windows 8 iyo Windows 8.1. Hubi faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taageeray telefoonada Nokia .
Tallaabo 1: Ku rakib oo ay maamulaan MobileTrans kombiyuutarka
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka. Suuqa ayaa aasaasiga muujinaysaa ilaa.
Talaabada 2: Isku aad Moto X iyo Nokia in kombiyuutarka
Labada ah ee telefoonada Nokia oo Moto X in kombiyuutarka Connect via fiilooyinka USB. MobileTrans Isla iyaga lagu ogaan doonaa. Markaas, aad telefoon Nokia ayaa la soo bandhigi doonaa Murayaad bidix ee suuqa hoose. Iyo Moto X u muuqataa on Murayaad saxda ah. Dhexdoodana "Flip" button. Waxaa Click iyo meelaha ka mid ah laba telefoonada la isku jireen doonaa.
Sida for "data Clear hor nuqul", waxaa la isticmaalaa in lagu caawiyo in aad faaruqiso Moto X kaydsiga ee xogta ka Nokia. Hubi ah u uncheck, sida ay doorashadaada.
Talaabada 3: Saxiixa xiriirada Nokia in Moto X
Sida aad ka arki, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, music, video iyo sawiro loo gudbin karaa si aad u Moto X waqti. Sidaas darteed, uncheck sanduuqa hor fariimaha qoraalka ah, sawirada iyo music.
Fiiro gaar ah: Haddii diirada Nokia phone waa nidaamka Windows, fadlan dib ilaa xiriiro si ay u OneDrive ku saabsan telefoonka ugu horeysay. Markaas Mobiletrans taageeri kartaa in la soo celiyo xiriirrada gurmad si phone android bartilmaameedka.
Hadda, waxaa la gaaray waqtigii ay. Guji "Start Copy". MobileTrans Bilaabi doonaan xiriirada kala iibsiga. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in labada telefoonada mar walba ku xiran. Marka lagu sameeyey, guji "OK" si loo soo afjaro kala iibsiga xiriir.
Isku day MobileTrans inay sameeyaan Nokia in Moto X xiriirada kala iibsiga!
Transfer Xiriirada ka Nokia in Samsung Galaxy S3
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in BlackBerry
The Best 5 Players Android Video
Sida loo Undelete Photos ka Android Phones & Alwaaxdii
Sida loo Play files MP4 on Android Phones